China ZZ Biodegradable Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell na-ebu 9 ″ x 9 ″ x3 ″ -200 na-emeputa igbe na ndị na-eweta ya | ZHONGSHENG
Mkpokọta ZZ Biodegradable White Sugarcane / Bagasse Clamshell akpa 9 ″ x 9 ″ x3 ″ -200
Ihe adighi: PCT091
Size: 232 * 232 * 50 / 80mm
Ogo katoonu: 45 * 38 * 21cm
Ọ dị mma ịkewa ma na-enye ọrụ akụkụ na akụkụ iji ZZ PCT081 Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell Containers. Ejiri shuga okpukpo eke sitere n'okike, a na-ere trays ndị a dị n'ime ụlọ kpamkpam, a na-erekwa ya, na-eme ka ha bụrụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi na tebụl ndị ọzọ a pụrụ ịtụfu. N'iji mkpuchi a na-ejigide ya na aka a na-ejide aka, trays ndị a na-ewepu nri dị mma maka ọrụ ndị a na-ebu ngwa ngwa. Nkwakọba nri ndị a nwere ihe na-egbochi griiz iji gbochie mmụba na ọgba aghara mgbe ha na-enye iwu. Tụọ 9 sentimita asatọ n’ogologo site na sentimita 9 n’ogologo na sentimita 3 n’ịdị elu mgbe emechiri, ndị a weghara trays erimeri nwere ike ijigide ụdị nri na-atọ ụtọ, mac na chiiz, poteto a mịrị amị, na nri ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Ebufe na igbe 200.
ZZ Biodegradable Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell na-ebu 9 ″ x 9 ″ x3 ″ -200 ọnụ na-adịkarị iche ma na-eje ozi ntinye na akụkụ iji ZZ PCT081 Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell Containers. Ejiri shuga okpukpo eke sitere n'okike, a na-ere trays ndị a dị n'ime ụlọ kpamkpam, a na-erekwa ya, na-eme ka ha bụrụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi na tebụl ndị ọzọ a pụrụ ịtụfu. N'iji mkpuchi a na-ejigide ya na aka a na-ejide aka, trays ndị a na-ewepu nri dị mma maka ọrụ ndị a na-ebu ngwa ngwa. Nkwakọba nri ndị a nwere ihe na-egbochi griiz iji gbochie mmụba na ọgba aghara mgbe ha na-enye iwu. Tụọ 9 sentimita asatọ n’ogologo site na sentimita 9 n’ogologo na sentimita atọ n’ịdị elu mgbe emechiri, ndị a wepụta trays erimeri nwere ike ijigide ụdị nri dị ụtọ, mac na chiiz, poteto a mịrị amị, na nri ndị ọzọ tọrọ ụtọ. Ebufe na igbe 200.
Njirimara nke tableware biodegradable:
1. Ejiri eriri 100% mee ya. Na-abụkarị akụrụngwa bụ okpukpu 80% okpete agwakọta na eriri ngị. Anyị nwere ike ịme akpa okpete 100% ma ọ bụ 100% akwa achara.
2. Anyị nwere ike ịme obibi akwụkwọ nke ọma. Nwere ike + A1: A10 akara ederede nke gị na ngwaahịa ahụ. Maka ugbu a, akwadoro ibi akwụkwọ na-acha otu agba. Ọzọkwa, a na-eji FDA ebipụta akwụkwọ edere ede.
3. mmanu 120 na mmiri mmiri 100.
4. Mpempe ọkụ na friji dị mma.
5. Enweta gburugburu ebe obibi, adịghị edozi ahụ, ịdị ọcha, enweghị nchekwa, ọ nweghị ihe ọ bụla na ahụike.
6. Akụrụngwa na-adigide. Mmanụ okpukpu na eriri achara na-esite n'okike, sitekwa na ahịhịa, ha na-alaghachi n'okike.
7. Enwere ike idozi ibu ahụ dịka ị rịọrọ. Anyị nwere ike dozie ọkpụrụkpụ nke ngwaahịa ahụ nke ọma ka ijikwa ịdị arọ ya. Maka okwute 9 inch a, aro a tụrụ aro bụ gram 42-50 gram n'otu ibe. Ikike dị ala abụghị ihe na-akwado ihe, ebe ọ bụ na ọ ga-emetụta ogo ahụ. N'aka nke ọzọ, ịdị dị elu dị, ma ọ bụrụ na ịchọrọdịdị ka mma.
8. Ọnụahịa dabere na ibu. N'ụzọ anyị, anyị na-ekwu maka ibu dị larịị, ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ịgbanwe ibu ahụ, ọnụahịa ahụ ga-agbanwe ya otu o kwesịrị.
9. 100% compostable. Ngwaahịa a bụ ụlọ ezi nzere nke ụlọ.
10. Iri dịgasị iche, ụdị na ngwa dị. Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na ịkpụ akpụ na igwe.
11. Ọnwụ siri ike ma dị nro. Ọnụ ego ụgbọ njem anaghị adị elu, ebe anyị nwere ike itinye ihe dị ka tọn 14 na otu 40 ″ HQ.
12. Anyị na-anabata mmezi. Anyị nwere ike inyere gị aka imepụta ihe ọhụụ, ma nwee akara gị.
13. Kwesịrị ekwesị maka nri oyi na mmiri.
14. Anyị nwere ike ịme obibi akwụkwọ nke ọma. Nwere ike ịnwe akara nke gị na ngwaahịa. Maka ugbu a, akwadoro ibi akwụkwọ na-acha otu agba. Ejiri FDA gbaara ya akwụkwọ.
15. pkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ bụ iberibe ngwaahịa dị iche iche 100 ga-etinye n'ime otu polybag, ma kpuchie okpomoku. Anyị nwekwara ike ime mkpọ mkpọ, dịkwa ka mkpọda shrine na-etinye n'ime igbe ngosi.
Nke gara aga: ZZ Biodegradable Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell nwere - 3- ngalaba- 9 ″ x 9 ″ x3 ″ -200
Osote: ZZ Biodegradable Rectangle White Sugarcane / Bagasse Clamshell na - eburu 3-Compartments- 8 ″ x 8 ″ x3 ″ -200 igbe
ZZ Eco Ngwaahịa 750ml Rectangle Biodegradable B ...
ZZ Eco Ngwa 1500ml Rectangle Biodegradable ...